Mbola tsy nitsangana izay lehibe noho i Joany Batista
Alakamisy 12 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 11, 11-15.
Izay manan-tsofina hihainoana aoka hihaino. Asehoy anay ry Tompo ny hatsaram-ponao ary omeo anay ny famonjena avy aminao.
Tsy tian'Andriamanitra hisy very...
Talata 10 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 18, 12-14.
Tsy misy avelan'Andriamanitra ho very na iray aza. Sarobidy aminy ny tsirairay ka raha misy ny mania, tsy avelany fa tadiaviny. Indro ny avy ny Mpanjaka Tompon'ny tany ary Izy no hanafaka antsika amin'ny ziogam-panandevozana.
Alatsinainy 09 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 1, 26-38.
Mankalaza manetriketrika an'i Masina Maria notorontoronina tsy azon-keloka, Mpiaro voalohany an'i Madagasikara isika izao. Ny nahatorontoronina an'i Jesoa tao an-kibony ny Evanjely amin'izany.
Pejy 88 amin'ny 90